DHAGEYSO Dhalinyarada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay isbadal buuxa la imaadaan Sanad kadib.
Ayadoo xalay habeenkii labaad magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya lagu qabtay munaasabada maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May ayaa waxaa lagu booriyay da’yartu inay isbadalo dhanka hormarka ah la yimaadaan sanadka hada u bilowda isla amrkaana sanad guurada kale ay soo bandhigaan waxyaabaha ay dalkooda ku soo kordhiyeen.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Khayre oo xalay khudbada u jeedinayay boqolaal ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay madaxda mustaqbalka ka yihiin jiilka soo korayana laga doonayo isbadal dhinacyo badan ah si ay u hantaan hogaaminta dalkooda.
Ra’isulwasaaraha khayre ayaa sheegay inay 12 bilood kadib u yeeri doonaan dhalinyarada ayna waydiin doona waxa u qabsoomay,halka ay gaareen iyo ka mira dhalintooda ku aadan hiigsiga aayaha dalkooda.
Sanadkasta 15 bisha May dalka Soomaaliya waxaa lag xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waana maalin qaymo weyn ugu fadhida maadaama ay tahay markii ugu horaysay ee la Aas-aasay dhalinyaradii xornimada Soomaaliya u soo dagaalan tay ee SYL.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalamka ugu dhalinyarada badan maadaama bulshadeeda in kabada boqolkiiba 75 shan lagu sheegay inay dhalinyaro yihiin hadan majiro hormar iyo firfircoono ay dhalintaasi soo kordhiyeen taasoo loo aynaynayo burburbkii uu dalkoodu u soo jiray mudadii rubac qarniga ka badnayd ee dowlada La’aanta.
← dhageyso Gudiga Dastuurka Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku tilaamay in la xaday Dastuurka Soomaliya.
NKorea threatens to cancel US summit And suspends talks with South Korea →